सडक नै नभएको नगरपालिकाका मेयरलाई ८० लाखको स्कारपियो गाडी ! — Motivatenews.Com
सडक नै नभएको नगरपालिकाका मेयरलाई ८० लाखको स्कारपियो गाडी !
भदौ २०, जाजरकोट – जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले ८० लाखको एउटा स्कारपियो र ६ वटा मोटरसाइकल किनेको छ । तर छेडागाडका कुनै पनि वडामा मोटरबाटोको सुविधा छैन । कच्ची सडक सञ्जालसँग नजोडिएको बारेकोट गाँउपालिकाले पनि दुईवटा मोटरसाइकल किनेको छ । कुशे गाँउपालिकाले दुई वटा बाइक खरिद गरेको गाँउपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । उनले गाउँपालिकालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्कारपियो दिन सहमति जनाइसकेकाले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
भेरी नगरपालिकासँग जनप्रतिनिधि आउनु अघि नै खरिद गरिएको एक स्कारपियो गाडी छ । भेरीमा ३ वटा वडाध्यक्षसँग मोटरसाइकल छ । नगरले एउटा मेयर, उपमेयरको एक स्कुटी र अरु चारवटा कर्मचारीसँग रहेका गरी ९ मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाले पनि सात वटा मोटरसाइकल किनेको छ । १३ वटा वडा रहेको नगरपालिकाका अधिकांश वडामा मोटरबाटो पुगेको छैन ।
त्यस्तै शिवालय गाँउपालिकाले एउटा स्कारपियो जिप र १४ वटा बाइक किनेको लेखापाल दीपबहादुर बुढाले बताए । ९ ओटा वडा रहेको गाँउपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ मा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन । अरु वडामा पनि कच्ची सडक हिउँदमा मात्र चल्छ तर गाँउपालिकाले ५५ लाख रूपैयाँमा गाडी र ३२ लाखमा १४ वटा मोटरसाइकल गरी करिब ८७ लाख रूपैयाँ खर्चेको छ ।
स्कारपियो कारमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र शाही चढ्छन् । उनले एउटा मोटरसाइकल पनि आफूसँगै राखेका छन् । ९ वटै वडाध्यक्षले एक , एक वटा मोटरसाइकल बुझेर लगेका छन् । बाँकी मोटरसाइकल कार्यकारी अधिकृत, लेखापाल र प्राविधिकले चलाउँछन् । उनीहरू सबैले गाँउमा भन्दा सदरमुकाम, सुर्खेत, नेपालगञ्ज आउँदा , जाँदा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले जनताको काम छिटोछरितो गर्न सहज होस् भनेर गाँउपरिषद निर्णय अनुसार गाडी खरिद गरिएको बताए । ‘हामीले विलासिताका लागि गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरेका होइनौं’, शाहीले भने, ‘समयको माग र आवश्यकता अनुसार किनेका हौं । यसमा कुनै दुरूपयोग भएको छैन र हुँदैन पनि ।’
जनप्रतिनिधिले गाँउमा सडक नपुग्दै गाडी किनेको तर जनतालाई अनावश्यक कर थोपरेको भन्दै भेरी ३ का कृष्णविक्रम शाहले उनीहरूको आलोचना गरे । शाहले भने, ‘जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवासुविधा र विलासितामा केन्द्रित भए ।’